About Us - Qingdao Renergy Qalabka Co., Ltd
Qingdao Renergy Qalabka Co., Ltd., oo ku yaalla Qingdao, Shiinaha, waa shirkad Hi-casriga ah ku hawlan cilmi baarista, soo saaridda, iibka iyo la talinta farsamo nidaamka korontada tamar cusub yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka iyo nidaamka ilaalinta tamarta. Iyadoo R xoog & D awood, nidaamka tayada adag, Renergy waa inay awoodaan inay bixiyaan adeeg taageero technology tamar cusub oo dhamaystiran macaamiisha.
waxyaabaha ugu muhiimsan: Nidaamka marawaxadaha dabaysha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka hoos 100kw, qoraxda ku Roobka iyo nidaamka Roobka off, saqafka nidaamka maalgashiga qoraxda iyo dhismaha; dabayl iftiinka jidka qoraxda, iftiinka qoraxda ee beerta, LED koraan iftiinka, LED bay iftiinka sare, LED iftiin tunnel, LED iftiinka jidka, tamarta iftiinka warshadaha lagu badbaadinayo in toobaddii iyo tamarta la Wanaajiyey ka ilaalinta.
Renergy leeyahay technology muhiim ah in industry tamar cusub. technology garoonka variable for marawaxadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka dabayl size xallin karo dhibaatada ammaanka hawlgal marawaxadaha dabaysha. garoonka variable, nidaamka badbaadada ABS, nidaamka gacanta caaqil, oo madal la socodka fog siiyaan ilaalinta ammaanka saldhigga awoodda dabaysha orodka.
Warshadda RENERGY ayaa madal ugu horumarsan iyo is-horumariyo matoor imtixaanka, nidaamka dheelitirka rotor dabaysha, garoonka variable madal imtixaanka, iyagoo jirrabaya xoog daal shaybaarka iyo qalabka kale ee samaysa marawaxadaha dabaysha kala duwan oo khaas ah la ogaado, Warshadda ayaa awood u leh in ay 100sets bixinta ee samaysa marawaxadaha dabaysha bishiiba.
nidaamka marawaxadaha dabaysha ka mid ah marawaxadaha dabaysha, munaarad, on xakamaysada Roobka iyo inverter, wajiga kaliya ama xiriir Roobka saddex wajiga. marawaxadaha dabaysha Renergy awood u waafaqayaan la inverters Roobka ka ABB, awood EL iyo brand kale caanka ah ee Shiinaha iyo dibadda.
marawaxadaha dabaysha RENERGY aad ayaa loo jecel in Germany, Denmark iyo dalalka kale ee Yurub, waxqabadka ayaa ansixinta by wakiilada iyo macaamiisheena. nidaamka marawaxadaha dabaysha ayaa la kulantay aad u xawaaraha dabaysha ka badan 45 / s ee Denmark.
nidaamka marawaxadaha dabaysha ku haboon yahay beeraha, qoysaska, goobaha ganacsiga yaryar, saldhigga isgaarsiinta.
Si diiran u soo dhaweyn macaamiisha iyo saaxiibada ka soo adduunka oo dhan in ay soo booqdaan oo wada xaajood ganacsiga. Ina keena aynu wada shaqeeyaan our lacagta labada dhinac.